အယ်လ်ဘေးနီးယား ရိုးရာယုံကြည်မှုများ - ဝီကီပီးဒီးယား
(အယ်လ်ဘေးနီးယားဒဏ္ဍာရီ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အယ်လ်ဘေးနီးယား ရိုးရာယုံကြည်မှုများ (အယ်လ်ဘေးနီးယား: besimet popullore shqiptare) တွင် အယ်လ်ဘေးနီးယားလူမျိုးတို့၏ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ၊ ရာဇဝင်၊ ဒဏ္ဍာရီ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၌ ဖော်ပြထားသော ယုံကြည်မှုများပါဝင်သည်။ အယ်လ်ဘေးနီးယား ဒဏ္ဍာရီဆိုင်ရာ အခြင်းအရာများသည် ရှေးဦး ဘော်လ်ကန်ဒေသဇာစ်မြစ်နှင့် သက်ဆိုင်၍ ဒဏ္ဍာရီအားလုံးနီးပါးသည် ရိုးရာဘာသာတရားများဖြစ်ကြသည်။ အယ်လ်ဘေးနီးယား ရိုးရာယုံကြည်မှု၊ ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များသည် ဆိုင်ရာ တသီးတသန့်ရှိသော မျိုးနွယ်စု အဖွဲ့အစည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင် ရာစုနှစ်ချီ၍ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘေးနီးယား ရိုးရာပုံပြင်များ၊ ရာဇဝင်များကို မျိုးဆက်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ နှုတ်အားဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြပြီး အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ကိုဆိုဗို၊ မြေက်မက်ဆီဒိုးနီးယား၏ အနောက်ပိုင်း စသည့်တောင်တန်းဒေသများတွင်လည်းကောင်း အီတလီရှိ အာရ်ဘာရက်ရှ်လူမျိုးများ (Arbëreshë)၊ ဂရိရှိ အားရ်ဗန်နိုက်စ်လူမျိုးများ (Arvanites) ကြားတွင် ယခုထိတိုင် ရှင်သန်လျက် ရှိသည်။
အယ်လ်ဘေးနီးယားဒဏ္ဍာရီတွင် သဘာဝတရားအယူအဆ၊ အခြေခံ ဓာတ်ကြီးများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝတ္ထုများသည် သဘာဝလွန် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်ဟူ၍ မှတ်ယူနိုင်သည်။ နတ်ဒေဝါများမှာ ယေဘူယျအားဖြင့် လူပိုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ဘဲ လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေသော သဘာဝတရားများအဖြစ် တင်စားခိုင်းနှိုင်းမှုများသာဖြစ်သည်။ အယ်လ်ဘေးနီးယား ရိုးရာယုံကြည်မှုများ၌ ကမ္ဘာမြေကြီးသည် ထူးခြားသောယုံကြည်မှုတစ်ခု၏ အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်၍ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ယစ်ပူဇော်ခြင်းများနှင့် ဘာသာရေးထုံးတမ်းဆိုင်ရာ သန့်စင်ခြင်းတို့အတွက်အသုံးပြုသော ရှင်သန်နေသော၊ အလွန်မြင့်မြတ်သော၊ စွမ်းအားဖြင့်ပြည့်စုံသော အခြေခံအရာအဖြစ် 'မီး' သည်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည်။ မီးကို ရှိခိုးကန်တော့ခြင်းသည် 'မီးလင်းဖို'၊ 'နေ' (နေနတ်ဘုရား)၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဖြစ်ထွန်းမှုများကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘီဂျာ (သို့) ဘီစာ(Beja) သည် အယ်လ်ဘေးနီးယားယဉ်ကျေးမှုတွင် အခြေခံကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်ကာ မြင့်မြတ်သည့်အရာများဟုယူဆနိုင်သော နေ၊ လ၊ ကောင်းကင်၊ ကမ္ဘာ၊ ကျောက်တုံး၊ တောင်၊ ရေ၊ မြွေ စသည်တို့၏ ကျမ်းသစ္စာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နေနှင့်လကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းသည် အယ်လ်ဘေးနီးယား ရာဇဝင်များနှင့် ရိုးရာအနုပညာများတွင် ပါဝင်သည်။
အယ်လ်ဘေးနီးယား ရာဇဝင်များ၊ ဒဏ္ဍာရီများကို ကုသိုလ် နှင့် အကုသိုလ် (အကောင်း အဆိုး) ကွဲပြားခြားနားခြင်းသဘောဖြင့် စီစဉ်ထားသည်။ ထိုကွဲပြားမှုကို အကျော်ကြားဆုံး ပုံဖော်တင်ဆက်ခြင်းမှာ drangue (တန်ခိုးစွမ်းအားရှိ လူတစ်ပိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်) နှင့် မိစ္ဆာ kulshedra တို့၏ တိုက်ပွဲဖြစ်၍ မိစ္ဆာသည် သေခြင်းတရား၏ ရေထု၊ မြေအောက်ကမ္ဘာ၌ ထပ်တလဲလဲဖြစ်သော သံသရာပြန်ကျော့ခြင်း၏ တင်စားခိုင်းနှိုင်းမှုဖြစ်ကာ စကြာဝဠာအသစ်တဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို အောင်မြင်စေရန်ဆောင်ရွက်မှုလည်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း အောရာ (သို့) ဖက်တီယာတို့၏ ကံကြမ္မာ ပြုပြင်အကောင်ထည်ဖော်ခြင်းသည် စကြာဝဠာနှင့် လောကဥပဒေသများကို အစီစဉ်တကျ မှန်ကန်တည့်မတ်စေရန် လုပ်ဆောင်နေလျက် ရှိသည်။
အယ်လ်ဘေးနီးယား ရိုးရာဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ၌ အများအားဖြင့် တန်ဆာဆင်အသုံးပြုမှုသည် အသွင်ပြောင်လဲခြင်းဖြစ်၍ အမျိုးသားများသည် သမင်၊ ဝံပုလွေ၊ ဇီးကွက်များအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲကြကာ အမျိုးသမီးများသည် မြွေပါ၊ ဥဩငှက်၊ လိပ်များသို့ အသွင်ပြောင်းယူကြသည်။ အယ်လ်ဘေးနီးယား ရိုးရာ ကဗျာလင်္ကာများစွာ၌ သူရဲကောင်း သူချင်းများ (Kângë Kreshnikësh) ၊ ရာဇဝင်လာ သူရဲကောင်းအား ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအပေါ် အခြေခံထားသော အယ်လ်ဘေးနီးယား ကဗျာရှည်ပုံစံ သီချင်းများ၏ သမိုင်းကြောင်းမဟုတ်သည့် ရိုးရာသဘော အတွဲလိုက် သီချင်းများပါဝင်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Bonnefoy 1993, p. 253.
↑ Elsie 2001, pp. vii-viii.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Elsie 1994, p. i.
↑ Elsie 2001b, p. ix.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Bonnefoy 1993, pp. 253–254.
↑ Skendi 1967, pp. 165–166.
↑ ၇.၀ ၇.၁ Poghirc 1987, p. 178.
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ Poghirc 1987, pp. 178–179.
↑ ၉.၀ ၉.၁ Tirta 2004, pp. 68–69, 135, 176–181, 249–261, 274–282, 327.
↑ Tirta 2004, pp. 42–102, 238–239, 318.
↑ Elsie 2001, pp. 35–36, 193, 244.
↑ Tirta 2004, pp. 68–82.
↑ Elsie 2001, pp. 181, 244.
↑ Poghirc 1987, p. 179.
↑ Doja 2005, pp. 449–462.
↑ Kondi 2017, p. 279.
Bonnefoy၊ Yves (1993)။ American, African, and Old European mythologies။ University of Chicago Press။ ISBN 0-226-06457-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
Demiraj၊ Bardhyl (1997)။ Albanische Etymologien: Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz။ Leiden Studies in Indo-European (ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်)။ 7။ Amsterdam, Atlanta: Rodopi။ CS1 maint: ref=harv (link)
Doja၊ Albert (2000)။ Naître et Grandir chez les Albanais: La Construction Culturelle de la Personne (pdf) (ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ L'Harmattan။ ISBN 273848879X။ CS1 maint: ref=harv (link)
Doja, Albert (2005). "Mythology and Destiny". Anthropos 100: 449–462. doi:10.5771/0257-9774-2005-2-449.
Elsie၊ Robert (1994)။ Albanian Folktales and Legends။ Naim Frashëri Publishing Company။ 2009-07-28 တွင် မူရင်း (pdf) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
Elsie၊ Robert (2001b)။ Albanian Folktales and Legends။ Dukagjini Publishing House။ CS1 maint: ref=harv (link)
Elsie၊ Robert (2001)။ A Dictionary of Albanian Religion, Mythology and Folk Culture။ London: Hurst & Company။ ISBN 1-85065-570-7။ CS1 maint: ref=harv (link)
Elsie၊ Robert (2003)။ Early Albania: A reader of Historical texts, 11th–17th centuries။ Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag။ ISBN 9783447047838။ CS1 maint: ref=harv (link)
Elsie၊ Robert; Mathie-Heck၊ Janice (January 2004)။ Songs of the Frontier Warriors။ Bolchazy-Carducci Publishers။ ISBN 978-0-86516-412-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
Elsie၊ Robert (2007)။ "The Rediscovery of folk literature in Albania" (PDF)။ in Marcel Cornis-Pope; John Neubauer (eds.)။ History of the literary cultures of East-Central Europe: junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries.။ III။ Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins။ pp. 335–338။ ISBN 978-90-272-3455-1။ 22 December 2019 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 May 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
Elsie၊ Robert (2010)။ Historical Dictionary of Albania (PDF)။ Historical Dictionaries of Europe။ 75 (2 ed.)။ Scarecrow Press။ p. 255။ ISBN 978-0810861886။6October 2014 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
Elsie၊ Robert (2019)။ The Albanian Bektashi: History and Culture ofaDervish Order in the Balkans။ Bloomsbury Publishing။ ISBN 9781788315715။ CS1 maint: ref=harv (link)
Esposito၊ John L. (2004)။ The Islamic World: Abbasid caliphate-Historians. Vol. 1။ Oxford University Press။ ISBN 9780195175929။ CS1 maint: ref=harv (link)
Feizi၊ Abidin (1929)။ Grammatica della lingua albanese။ Pubblicazione del R. Istituto orientale di Napoli။ Napoli: Achille Cimmaruta။ CS1 maint: ref=harv (link)
Lambertz၊ Maximilian (1973)။ "Die Mythologie der Albaner"။ in Hans Wilhelm Haussig (ed.)။ Wörterbuch der Mythologie (ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့်)။ 2။ CS1 maint: ref=harv (link)
Kondi, Bledar (2017). "Un regard critique sur l'ethnographie de la mort en Albanie". Ethnologie française 166 (2). doi:10.3917/ethn.172.0277.
Kressing၊ Frank; Kaser၊ Karl (2002)။ Albania--a country in transition: aspects of changing identities inaSouth-East European country။ Nomos။ ISBN 3789076708။ CS1 maint: ref=harv (link)
Lloyd, A. L. (1968). "Albanian Folk Song". Folk Music Journal 1: 205–222.
Lurker၊ Manfred (2005)။ The Routledge Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons။ Routledge, Taylor & Francis။ ISBN 0-203-64351-8။ CS1 maint: ref=harv (link)
Mallory၊ James P.; Adams၊ Douglas Q., eds. (1997)၊ Encyclopedia of Indo-European Culture၊ London: Routledge၊ ISBN 978-1-884964-98-5၊ (EIEC) CS1 maint: ref=harv (link)
Mallory၊ James P.; Adams၊ Douglas Q. (2006)၊ The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World၊ Oxford, England: Oxford University Press၊ ISBN 978-0-19-929668-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Mann, Stuart E. (1952). "The Indo-European Consonants in Albanian". Language 28: 31–40. Linguistic Society of America. doi:10.2307/409988.
Mann၊ Stuart E (1977)။ An Albanian Historical Grammar။ Hamburg: Helmut Buske Verlag။ ISBN 9783871182624။ CS1 maint: ref=harv (link)
Matzinger၊ Joachim (2018)။ "The Lexicon of Albanian"။ in Klein၊ Jared; Joseph၊ Brian; Fritz၊ Matthias (eds.)။ Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ 3။ Walter de Gruyter။ ISBN 978-3-11-054243-1။ CS1 maint: ref=harv (link)
Minkov၊ Anton (2004)။ Conversion to Islam in the Balkans: Kisve Bahas ̧petitions and Ottoman Social Life, 1670-1730။ Brill။ ISBN 9004135766။ CS1 maint: ref=harv (link)
Novik, Alexander (2015). "Lexicon of Albanian Mythology: Areal Studies in the Polylingual Region of Azov Sea". Slavia Meridionalis 15: 261–273. doi:10.11649/sm.2015.022.
Pipa၊ Arshi (1978)။ Albanian Folk Verse: Structure and Genre။ O. Harrassowitz။ ISBN 3878281196။ CS1 maint: ref=harv (link)
Poghirc၊ Cicerone (1987)။ "Albanian Religion"။ in Mircea Eliade (ed.)။ The Encyclopedia of Religion။ 1။ New York: MacMillan Publishing Co။ pp. 178–180။ CS1 maint: ref=harv (link)
Sako၊ Zihni; et al. (Komisjoni i folklorit) (1954)။ Pralla popullore shqiptare (အယ်လ်ဘေးနီးယားဘာသာစကားဖြင့်)။ N.SH.B. Stabilimenti "Mihal Duri", Tiranë: Instituti i Shkencave။ CS1 maint: ref=harv (link)
Schirò၊ Giuseppe (1923)။ Canti tradizionali ed altri saggi delle colonie albanesi di Sicilia။ Stab. tip. L. Pierro။ CS1 maint: ref=harv (link)
Shah၊ Idries (2017) ။ World tales : the extraordinary coincidence of stories told in all times, in all places။ London: ISF Publishing။ pp. 229–232, 254–256။ ISBN 978-1-78479-120-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
Skendi၊ Stavro (1954)။ Albanian and South Slavic Oral Epic Poetry။ Philadelphia: American Folklore Society။ OCLC 3794368။ CS1 maint: ref=harv (link)
Skendi, Stavro (1967). "Crypto-Christianity in the Balkan Area under the Ottomans". Slavic Review 26: 227–246. doi:10.2307/2492452.
Skendi၊ Stavro (1967b)။ The Albanian national awakening။ Princeton: Princeton University Press။ ISBN 9781400847761။ CS1 maint: ref=harv (link)
Stipčević၊ Aleksandar (1977)။ The Illyrians: history and culture။ Noyes Press။ ISBN 978-0815550525။ CS1 maint: ref=harv (link)
Stipčević၊ Aleksandar (1989)။ Iliri: povijest, život, kultura (ခရိုအေးရှားဘာသာစကားဖြင့်)။ Školska knjiga။ ISBN 9788603991062။ CS1 maint: ref=harv (link)
Tagliavini၊ Carlo (1963)။ Storia di parole paganeecristiane attraverso i tempi (အီတလီဘာသာစကားဖြင့်)။ Morcelliana။ CS1 maint: ref=harv (link)
Tirta၊ Mark (2004)။ Petrit Bezhani (ed.)။ Mitologjia ndër shqiptarë (အယ်လ်ဘေးနီးယားဘာသာစကားဖြင့်)။ Tirana: Mësonjëtorja။ ISBN 99927-938-9-9။ CS1 maint: ref=harv (link)
Treimer၊ Karl (1971)။ "Zur Rückerschliessung der illyrischen Götterwelt und ihre Bedeutung für die südslawische Philologie"။ in Henrik Barić (ed.)။ Arhiv za Arbanasku starinu, jezik i etnologiju။ I။ R. Trofenik။ pp. 27–33။ CS1 maint: ref=harv (link)
Watkins၊ Calvert (1995)။ How to KillaDragon: Aspects of Indo-European Poetics။ London: Oxford University Press။ ISBN 978-0-19-514413-0။ CS1 maint: ref=harv (link)
West၊ Morris L. (2007)။ Indo-European Poetry and Myth။ Oxford University Press။ ISBN 978-0199280759။ CS1 maint: ref=harv (link)
Wheeler၊ G. Post (1936)။ Albanian Wonder Tales။ New York: The Junior Literary Guild and Doubleday, Doran and Company, Inc.။ pp. 247–280။ CS1 maint: ref=harv (link)
Wilkes၊ J. J. (1995)၊ The Illyrians၊ Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing၊ ISBN 0-631-19807-5 CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အယ်လ်ဘေးနီးယား_ရိုးရာယုံကြည်မှုများ&oldid=719981" မှ ရယူရန်
CS1 အယ်လ်ဘေးနီးယား-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (sq)
CS1 ခရိုအေးရှား-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (hr)
CS1 အီတလီ-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (it)